Mai Chibwe VekwaZimuto: OK ndomboita unyope hwekunyora
Ndange ndichiverenga mabhuku ukuchikoro saka ndange ndisinganyori pano. Ruregerero vanhuwee. Muri papi nenyaya dzemumba? Muri kugutsana here kana kuti muri kuhurirana mudzimba menyu? Dai zvaibvira shuwa dai vanhu vachiti varoorana vonyatsohwisisa kuti zvise zvinodiwa nomurume/mukadzi wako mumba menyu iwe womupa. Chero akamuka pakati peusiku ane zemo iwe womupa chete. Chinangwa chako ndechokugutsa umwe wako iyewo achikugutsa mose mogara mune mufaro amoyo. Hino ukatanga kurambira umwe wako iwe ndiwe uchatanga kufunganya kuti pamwe achanohura, asi iwe ndiwe watanga kusahwisisa mumba menyu.
Batai nyaya iyi zvakakwana moihwisisa mogara nayo pamoyo nemufungwa. Kuhurigwa kunogwadza. Ukaona munhu ane mukadzi/murume akamuhurira unoona kuti shuwa munhu haachina konifidhenzi muupenyu hwake. Zvangove zvokushaya kuti oita hake sei asi upenyu hahuchanakidzi.
Hino ukazofunga kuti ndiwe wakaitisa kuti umwe wako ahure ndipo paunozvituka ugoonazve kuti chokuita hapachina. Wakazvikanyira upenyu hwako wega.
Dzimwe tsamba dzandinowana kubva kune vanonyora dzichitsanangura kusvota kweupenyu mukadzi/murume ahura, unoverenga woona kuti munhu uyu akashaya hama yokutaura nayo anokwanisa kuzviuraya. Wozoti paya wataura naye kwekanguva woona kuti RHOJI yavo mumba yange isina kugutsana. Nyakuhura aimbomirira kwenguva achida asi achinyimwa.
Vamwe varurme havahwisisi kuti mukadzi anodawo zvemazuva ese. Unohwa kohi anoti akaneta. Isu hatisi kuti murume ngaasaneta, asi kuti ngaasaneta kuzotadzawo kuti twiii chete. Kana murume akaneta mubatsirewo kumutsa zvivete. Kana changomuka chete, iwe mukadzi chivanzarika murume wako manhede iwe wokwira pamusoro pake womutanyanga wotora hako chiya chati twii wochipinza panopinzwa woita zvinoitwa nechiuno kusvika mapedza. Iye akangoda kuita sehove yakafa nokuda kwekuneta kwake rega aite . Mapedza, burukapo, wopukuta murume, womudetemba, womuvatisa nedivi womuisa muromo pazamu iwe ruoko gwako seri kwake womudziisa nomuviri wake. Napo napo unohwa oridza magwiriri avata. Kuseni ndiwe she wemumba.
Vamwewo vakadzi kusahwisisa kuti murume haafaniri kugara asina anotapudzwa unga. Kana wakaneta murume ane zemo, rega murume awane chokutamba nacho, mazamu, magaro, chitubu, etc. kana oda kuita basa, iwe chivata nedumbu womusimudzira chiuno zvishoma angopinda iwe chererusa muviri uzorore iye oita zvaanoda kusvika aguta. Asi usazoti ziii sepasina zvaari kuita. kudzawo murume achiita, hwikwa kuti uri kunakigwa. Murume ndewako saka anonaka chete. Mupewo manyawi. Achinopedza, muudze kuti waguta, womuisa pazamu movata.
Rhoji chinhu chikuru mumba, chinongoregwa kana mukadzi ari kumwedzi kana kuti umwe wenyu achigwara chete. Kuvata hope chaidzo iwe warambira umwe wako ndihwo utsinye chaihwo.
Posted by Mai E Chibwe at 06:53